Puntland oo xukun ku riday Ragii ka dambeeyay dilkii Sheekh C/qaadir Nuur Faarax. – SBC
Puntland oo xukun ku riday Ragii ka dambeeyay dilkii Sheekh C/qaadir Nuur Faarax.
Posted by Webmaster on May 23, 2013 Comments
Maanta Maxkamada Ciidamada Qalabka sida gobolada Nugaal, Mudug, Sool iyo Ceyn oo ay fadhigeedu tahay Magaalada Garoowe Caasimada Puntland waxa ay xukuno dil ah ku xukuntay 7 nin oo sida la sheegay ka mid ahaa dadkii ka dambeeyay dilkii SHeekh C/qaadir Nuur Faarax .
Intii ay socotay Maxkamadeynta Ragan todobada ah ayaa la sheegay in la hor keenay Maxkamada cadeymaha ragan oo qiranaya falka dilka ah ee loo geystay Sheekh C/qaadir Nuur Faarax, Hubkii ay ku dileen iyo weliba waxyaabo kale oo ay amanka qal qal ku gelinayeen.
Inkastoo Maxkamadeynta Maanta Saxaafadu banaan joog ka aheyd, ayaa hadana mar aan xiriir la sameynay maxkamada naloo xaqiijiyey in shan ruux oo maqanayaal ah xukuno dil toogasho ah lagu riday oo kala ah
1-Maxamed Cabdulaahi Ilkacase
3-Shaqale Xasan Haybe
5-Iyo nin Shiine keliya lagu soo koobay magaciisa.
Xukunada ay Riday Maxkamada ayaa dhamaantood aha akuwo Dil toogasho ah, waxaana maxkamada laga shaaciyay in ragan la xukmiyay ay heystaan mudo 30cisho ah oo racfaan ah .
SBC International Garoowe,